Talosiinta muhaajiriinta iyo qaxootiga
Xaaladda deganaanshaha, koorsada luqadda, shaqo raadinta - ma waxaad raadineysaa talo ku saabsan mowduucyadan? Markaa waad joogtaa halkan. Haddii aad ka timid waddan ka tirsan Midowga Yurub ama waddan kale, haddii aad qaxooti ku timid Jarmalka ama sabab kaleba ha noqotee - waxaan kaa caawin doonnaa shaqsi ahaan, qarsoodi iyo lacag la'aan.
Wixii talo ah: khadka tooska ah
Waxaad si sahal ah ugu bilaabi kartaa la tashiga adigoo gujinaya boodhka. Nidaamkayaga talo-bixinta ayaa ka furmaya daaqad cusub. Waad iska diiwaangelisaa oo noo soo qoraysaa fariintaada ama su'aalahaaga. Fadlan la soco in talo shaqsiyeedka caadi ahaan lagu bixiyo Jarmal.
Wargalin dheeraad ah?
Tilmaamo kooban ee talo bixinta khadka tooska ah
Waxaad u adeegsan kartaa adeegga talobixinta khadka tooska ah ee 'Caritas' si aad su'aalahaaga uga weydiiso mowduucyo caawimaad kala duwan si fudud oo aamin ah Waad is qarin kartaa haddii aad rabto. Khubarada Caritas ayaa sida caadiga ah kaga jawaabi doona su'aalahaaga laba maalmood oo shaqo gudahood.
Talobixinta uma baahnid cinwaanka emaylka. Si looga hortago dadka aan loo idman inay akhriyaan su'aashaada iyo jawaabta la-taliyayaasha, Caritas waxay soo saartay aag latalin oo sugan. Waa inaad marka hore gasho tan adiga oo aan lagaran. Halkaas ayaad ku qoreysaa su'aashaada (oo la mid ah e-maylka caadiga ah) halkaasna waxaad sidoo kale ka soo qaadan kartaa jawaabta.
Samee magac isticmaale iyo lambar sir ah. Waa inaad sameysaa qoraal labadoodaba si aad talo uga hesho lataliyeyaasha hadhow.
Gali lambarka boostada ee meesha aad ku nooshahay. Codsigaaga waxaa loo gudbin doonaa la taliye aagaaga ah. Tani way kaa caawinaysaa haddii aad ballan uga baahato xarun latalin dambe.
Haddii aad si ikhtiyaari ah u bixiso cinwaan emayl, waxad dib u dhigan kartaa lambarkaaga sirta ah haddii loo baahdo. Intaas waxaa sii dheer, nidaamku wuxuu kugu ogeysiinayaa emayl ahaan in jawaabta dalabkaaga la helay. Ka dib waad akhrin kartaa ka dib markaad gasho bogga talobixinta aaminka ah.
Tani waa sida talobixinta onlaynka ahi u shaqayso
Waxaad u adeegsan kartaa adeegga talobixinta khadka tooska ah ee 'Caritas' si aad su'aalahaaga uga weydiiso mowduucyo caawimaad kala duwan si fudud oo aamin ah Waad is qarin kartaa haddii aad rabto. Khubarada Caritas badanaa waxay kaaga jawaabaan su'aalahaaga hore laba maalmood oo shaqo gudahood.
Waxaad ka heli kartaa tilmaamaha fiidiyowga ee ku saabsan sida loo isticmaalo, loo diiwaangaliyo oo loo galo nidaamka la-talinta ee khadka tooska ah ee loogu talogalay dadka talo ka raadinaya kanaalkayaga YouTube-ka (fiidiyowyo sharraxaad ah qaarkood ayaa lagu soo daray qaybta hoose ee boggan).
Nidaamka talobixinta khadka tooska
Uma baahnid cinwaanka emaylka wadatashiga. Si looga hor istaago dadka aan loo idman inay akhriyaan su'aashaada iyo jawaabaha la-taliyayaasha, Caritas waxay soo saartay madal latalin oo sugan. Marka hore waa inaad iska diiwaangelisaa tan - dabcan suurtagal ahaan qarsoodi la'aan! Halkaas ayaad ku qoreysaa su'aashaada (oo la mid ah e-maylka caadiga ah, kaliya waa la keydiyey), halkaasna waxaad sidoo kale ka soo qaadan kartaa jawaabta.
Xullo aagga la-tashiga aad rabto inaad su'aal ku weydiiso. Waxaad ka heli kartaa muuqaalka guud ee aagagga shabakadda www.caritas.de/onlineberatung. Waxaa laga yaabaa inaad horeyba u heshay aaggaaga oo aad horayba ugu jirtay bogga ku habboon.
Tabeelaha sawirka uu ku qoran yahay "Online-Beratung starten"
Guji batoonka cas si aad talo uga siiso khadka tooska ah daaqad cusubna way fureysaa.
Waxaad sidaas ku sameysay xiriir aamin ah bar-kulankeena talo-bixinta. Diiwaangeli: Isdiiwaangalintu waa dhakhso waxaadna noqoneysaa qof aan lagaranayn hadii aad rabto:
>>> Samee magac-isticmaale iyo lambar sir ah. Waa inaad xasuusataa labadaba si aad hadhow u hesho jawaabta lataliyaha.
>>> Gali lambarka boostada meesha aad degantahay. Codsigaaga waxaa loo gudbin doonaa la taliye aagaaga ah. Tani way ku caawinaysaa haddii aad ballan ka doonato xarunta latalinta hadhow.
>>> Haddii aad si ikhtiyaari ah u bixiso cinwaan emayl, waad dib u soo celin kartaa lambarkaaga sirta ah haddii aad ilowday.
Qor su'aashaada oo guji falaarta si aad farriinta ugu dirto. Su'aashaada waxaa loo diri doonaa lataliye. Waxaad jawaabta ka heli doontaa sanduuqaaga boostada 48 saacadood gudahood maalmaha shaqada.
Soo qaado jawaabta
Dib ugu laabo degelka aagga latalinta ee aad su'aasha ku weydiisay (dulmar guud www.caritas.de/onlineberatung).
Guji batoonka guduudan si aad talo uga siiso khadka tooska ah madal talabixinta lagu yaqaanna waxay ka fureysaa daaqad cusub.
Soo gal: Waxaad ubaahantahay magacaaga isticmaale iyo lambarkaaga sirta ah (waxaad dooratay labadaba markii aad diiwaangashanayd). Waxaad markaa dib ugu soo noqotey aagga la ilaaliyo ee sanduuqaaga boostada.
Akhriso jawaabta: Fadlan xulo "La-tashiyadayda" meeniska bidix ku yaal. Kadib waad aqrin kartaa jawaabtaada.
Waxa kale oo aad kala soo bixi kartaa buugga barnaamijka cusub ee talo bixinta khadka tooska ah ee Caritas halkan hoose. Buug-gacmeedka ayaa ugu horreyn loogu talagalay la-taliyeyaasha wuxuuna u sharraxayaa dhammaan howlaha madasha iyaga. Si kastaba ha noqotee, aragtida madal ee dadka talo raadinaya ayaa sidoo kale la sharaxay. Tani waxay ka dhigan tahay in qof kasta oo doonaya inuu wax badan ka ogaado sida talobixinta khadka tooska ah u shaqeyso uu buugga ka heli karo faahfaahinta lagama maarmaanka ah
Bayaanka ilaalinta macluumaadka ee talobixinta xarumaha talo bixinta iyadoo loo marayo barnaamijka talo bixinta ee khadka tooska ah ee 'Caritas'
Difaaca xogtaadu waa mid muhiimad gaar ah leh markay tahay talo shaqsiyeed. Si aad ulaxiriirto xarumaha talobixinta si qarsoodi ah oo aamin ah, waxaan diyaarinay barnaamij talobixin oo khadka tooska ah kaas oo dammaanad qaadaya heerka ugu sarreeya ee ikhtiyaariga ah.
La talinta dadka xaaladaha adag ee nolosha waxay u baahan tahay heerka ugu sarreeya ee sirta. Annaga oo ah Ururka Jarmalka Caritas waan ka warqabnaa mas'uuliyaddan waxaanna qaadnay tallaabooyin adag oo farsamo iyo abaabul si loo hubiyo soo bandhig madal talo bixin ah oo damaanad qaadeysa amniga xogtaada. Aniga oo ku hadlaya magaca xarumaha talo bixinta, oo aad kala xiriiri kartid adoo adeegsanaya barta talobixinta, waxaan hoosta kuugu soo sheegi doonaa sida macluumaadkaaga loo maareyn doono marka aad isticmaaleyso barnaamijka talo bixinta ee khadka tooska ah:
Waxyaabaha laga talo-bixiyo
Talada khadka tooska ah waxay u qaybsan tahay aagag kala duwan oo talobixin madax-bannaan. Waxaad ka heli kartaa muuqaalka guud ee mowduucyada aan ku siin karno talo khabiir ah www.caritas.de/onlineberatung. Badhanka "Si aad talo u siiso" wuxuu kuu geynayaa bogga-hoose ee aagga talo bixinta.Xaaladaha qaarkood waxaa jira durbaba ikhtiyaari ah xulashada goob ama xarun talobixin ah, oo aad markaa kala xiriiri karto adoo adeegsanaya isku xirka bogga talo bixinta ka dib diiwaangelinta.
Dalka oo dhan, tiro badan oo xarumo talobixin ah ayaa u wakiishay Ururka Jarmalka ee Caritas inay bixiyaan barnaamij talo bixin oo sugan kaas oo kuwa talo bixiya ay kula xiriiri karaan xarumaha talo bixinta. Mas'uul ka ah macnaha sharciga ee ilaalinta macluumaadka kaniisadda (KDG) had iyo jeer waa xarunta talobixinta ee aad la soo xiriirto. Xarunta latalinta gaarka ah ee mas'uulka ah ayaa lagugu tusi doonaa foomka waqtiga diiwaangelinta waxayna kuxirantahay aagga latalinta iyo goobta aad dooratay.
Si aad ula xiriiri karto xarun latalin, waa inaad marka hore isdiiwaangelisaa. Macluumaadka soo socda ee loo baahan yahay ayaa lagaa codsan doonaa - waxaad sidoo kale bixin kartaa macluumaad dheeraad ah oo tabaruc ah:
Macluumaadka loo baahan yahay
Markii aad isdiiwaangelineyso, waxaa lagu weydiin doonaa inaad ku qorto magaca isticmaalaha iyo lambarka sirta ah. Waxaad u adeegsan kartaa magac been abuur ah tan, taas oo aan oggolaanayn in wax gunaanad ah laga gaadho magacaaga dhabta ah. Macluumaadkan ka sokow, waxaa laga yaabaa inay lagama maarmaan noqoto, iyadoo kuxiran aagga la-talinta, inaad gasho lambarka boostada haddii aadan horay u dooran meel. Haddii aad dooratay goob ku taal bogga aagga talo bixinta, halbeegga ayaa loo wareejinayaa foomka diiwaangelinta oo xarunta talobixinta ayaa si toos ah loo soo bandhigayaa. Haddii aad gashid lambarka boostada ee foomka diiwaangelinta, soojeedimaha xarumaha talo bixinta ee kuugu dhow ayaa la soo bandhigi doonaa.
Macluumaadka ikhtiyaariga ah
Intaas waxaa sii dheer, markii aad isdiiwaangelineyso, waxaad iskood ugu bixin kartaa macluumaad dheeri ah oo faa iido u leh talo bixinta. Macluumaadkan waxaa ku jira taariikhdaada (saamaynta, qaraabadaada, kuwa kale), da'daada, jinsigaaga iyo macluumaad gaar ah oo adiga kugu saabsan Mawduuca la-tashiga Haddii aad gasho cinwaanka emaylkaaga, waxaad heli doontaa otomaatig Ogeysiisyo sida ugu dhakhsaha badan jawaabaha cusub ee aad uga heli karto madal. Cinwaanka emaylkaaga ma arki karo xarunta talobixinta waxaana kaliya u adeegsadaa nidaamka in lagu diro ogeysiisyo otomatik ah.
Ujeedo iyo aasaas sharciyeed ee ka shaqaynta xogta
Xogta aad soo gasho markii aad isdiiwaangelineyso waxaa loo isticmaali doonaa oo keliya abuurista a Xisaabaadka loo adeegsaday barxada latalinta. Ujeedada loo abuuray xisaab waa Fududeynta talo shaqsiyeed xarunta talobixinta la xushay. Gudaha Haddii aad isdiiwaangaliso, waxaa lagaa codsan doonaa inaad ogolaato siyaasadan asturnaanta iyo isticmaalka kukiyada (eeg hoos). Oggolaanshahaaga, ka baaraandegidda xogta foomka diiwaangelinta iyo ka shaqeynta xog dheeri ah oo aad siiso xarunta la-talinta la xushay waxay ku saleysan yihiin oggolaanshahaaga sida waafaqsan Qodobbka § 6 farqada 1 xarafka a ee xeerka xog-ilaalinta kaniisadaha KDG. Aasaaska sharci ee tani waa ogolaanshahaaga la helay intii lagu jiray diiwaangelinta iyadoo la raacayo Qodobbka § 6 farqada 1 xarafka a ee xeerka xog-ilaalinta kaniisadaha KDG.
Xogtaada waxaa fiirin kara oo keliya xarunta talobixinta ee la xushay, la-taliyayaasha halkaas jooga iyo naftaada. Aniga oo ka wakiil ah xarunta la-talinta, xogtaada ayaa la kaydin doonaa oo lagu kaydin doonaa server-yada adeegga talo bixinta ee khadka tooska ah ee 'Caritas', oo ay bixiso adeeg bixiye lagu kalsoon yahay Goobta Jarmalka. Deutsche Caritasverband e.V. suurtagal kama ahan in ay aragto xogtaada oo kaliya waxay siisaa kaabayaasha farsamada ee talobixinta khadka tooska ah ee qaabsocodka iyada oo ka wakiil ah Qodobbka § 29 ee xeerka xog-ilaalinta kaniisadaha KDG. Xarunta talobixinta ee la xushay ayaa mas'uul ka ah, waxay ka baaraandegi doontaa farriimahaaga waxayna kugula talin doontaa waxaad ka walwalsan tahay. Xogtaada waligeed looma gudbin doono cid saddexaad iyadoon lagaa helin ogolaansho.
Isgaarsiinta iyada oo loo marayo madasha talo bixinta
Markii aad isdiiwaangaliso, waxaad farriin u qori kartaa xarunta la-talinta oo aad heli kartaa farriimo.
Xogta aad ku gudbiso adoo ku qoraya qeybta qoraalka waxaad ka baaraandegi doontaa xarunta talobixinta ee la xushay oo keliya iyadoo ujeedadu tahay inay kula soo xiriiraan oo ay ku siiyaan talo shakhsiyeed mawduucaaga.
Qaatayaasha xogta, baaxadda howsha iyo amniga xogta
Dhammaan isgaarsiinta ayaa kaliya u muuqata adiga iyo xarunta talobixinta masuulka ka ah. Dhammaan xogta aad ku gudbiso adoo adeegsanaya qoraalka qoraalka waxaad ku gudbineysaa isku xirnaan aamin ah oo lagu kaydiyaa foom sir ah oo ku jira serverka qandaraaslaha. Nidaamku ma ururiyo xog kale oo shakhsi ah; gaar ahaan, cinwaankaaga IP-ga lama keydin.
Markaad gasho barta talobixinta, nidaamku wuxuu ku kaydiyaa buskudka kala duwan qalabkaaga. Kukiyada waa faylal qoraal yar oo loo isticmaali karo in lagu aqoonsado biraawsar inta lagu gudajiro fadhiga biraawsarka. Kukiyada ay isticmaalaan barxadda waxaa loo isticmaalaa si gaar ah si loo ilaaliyo diiwaangelintaada, si loo hubiyo nidaamka iyo loo diiwaangaliyo waxyaabaha la soo gelinayo. Barxadku wuxuu ku kaydiyaa buskudka soo socda qalabkaaga:
Magaca muddada kaydinta marin u helida cid saddexaad Kalfadhiga CSRF-TOKEN majiro kulan keycloak maya maya kulan rc_token no kalfadhiga rc_uid maya cusbooneysiin Kalfadhi bilaash ah oo aan la adeegsanin Fadhiga rasmiga ah majiro isticmaaleXirirka kalfadhiga xuquuq uma laha kuwa ay saameysay
Maaddaama xarunta la-talinta ay ka shaqeyso xogtaada shaqsiyeed, waxaad tahay maaddo xog ku dhex jirta macnaha Sharciga Ilaalinta Macluumaadka Kaniisadda (KDG) waxaadna leedahay xuquuqo kala duwan. Fadlan ogow in xarunta la-talinta ee aad dooratay ay tahay qofka mas'uul ka ah macnaha KDG isla markaana ay iyaga kaliya heli karaan macluumaadkaaga shakhsiyeed. Sidaa darteed, waa inaad toos ula xiriirtaa xarunta talobixinta ee tooska ah si aad u sheegato xuquuqdaada.
Qodobbka § 17 ee xeerka xog-ilaalinta kaniisadaha KDG: Waxaad codsan kartaa macluumaadka ku saabsan macluumaadkaaga shaqsiyeed ee ay ka shaqeyso xarunta la-talinta. Gaar ahaan, waxaad ka heli kartaa macluumaad ku saabsan ujeedooyinka ka shaqeynta, nooca xogta shakhsiga ah, qaybaha Qaatayaasha macluumaadkaaga loo sheegay ama loo sheegi doono, qorshaha Muddada keydinta, jiritaanka xuquuqda sixitaanka, tirtirka, xaddidaadda howsha ama diidmada, jiritaanka xuquuqda rafcaanka,
Qodobbka § 18, 19 ee xeerka xog-ilaalinta kaniisadaha KDG: Waxaad codsan kartaa sixitaan deg deg ah oo khaldan ama dhameystirka macluumaadkaaga shaqsiyeed ee ku kaydsan xarunta la-talinta. Waad codsan kartaa in la tirtiro xogtaada shakhsiga ah ee ay keydisay xarunta la-talinta haddii howshu aysan muhiim ahayn in lagu dhaqmo xuquuqda xorriyadda hadalka iyo macluumaadka, si loo fuliyo waajibaadka sharciga ah, sababaha danta guud ama sheegashada, jimicsiga ama difaaca dacwadaha sharciga ah.
Qodobbka § 20 ee xeerka xog-ilaalinta kaniisadaha KDG: Waxaad codsan kartaa ka shaqeynta xogtaada shakhsi ahaaneed in la saxo haddii aad ka doodo saxsanaanta xogta howshana ay sharci darro tahay.
Qodobbka § 22 ee xeerka xog-ilaalinta kaniisadaha KDG: Waxaad heli kartaa xog shaqsiyeed oo aad u gudbiso xarunta la-talinta qaab qaabaysan, qaab guud oo mashiinka laga akhrin karo ama codsan kara in loo gudbiyo qof kale oo mas'uul ah.
Qodobbka § 8 ee xeerka xog-ilaalinta kaniisadaha KDG: Waad la noqon kartaa ogolaanshahaaga ku shaqeynta xogta waqti kasta.
Qodobbka § 48 ee xeerka xog-ilaalinta kaniisadaha KDG Haddii aad wax su'aalo ama cabasho ah qabtid, waxaad la xiriiri kartaa. La xiriir sarkaalka ilaalinta xogta diocesan ee Kaniisada Katooliga oo ah www.datenschutz-kirche.de.
Telefoonka: +49 (0)69 80087188 00
Faakis: +49 (0)69 80087188 15
Badelida bayaanka xog-ilaalinta
Bayaankaan ilaalinta macluumaadka waxaa daabacay Ururka Jarmalka Caritas e. V. waa la bixiyay Xarumaha la-talinta waxay xaq u leeyihiin inay beddelaan bayaanka ilaalinta macluumaadka mustaqbalka ama inay tixraacaan bayaankooda ilaalinta macluumaadka.
Fadlan sidoo kale ogow qodobbada ilaalinta xogta guud ee caritas.de.